Namoaka kaonty banky tamin'ny zerô 'phantom' i Iran hanamarihana ny fifindrana amin'ny vola vaovao
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Namoaka kaonty banky tamin'ny zerô 'phantom' i Iran hanamarihana ny fifindrana amin'ny vola vaovao
Mba hanondroana ny fifindrana amin'ny vola vaovao dia namoaka kinova “phantom zeros” vaovao an'ny banky be mpampiasa indrindra ao amin'ny firenena ny Banky Foibe Iran.
Araka ny Banky foiben'i Iran (CBI), famolavolana vaovao an'ny fanamarihana dia manondro ny firosoan'ny Iran mankany toman, ny vola vaovao izay hitovy amin'ny 10,000 rial raha vao nampidirina tao Iran tamin'ny fiandohan'ny 2022.
Ny zerro efatra amin'ny marika rial vaovao an'ny 100,000 CBI dia somary maivana, somary naseho ny sarin'ilay naoty niparitaka tamin'ny haino aman-jery tany an-toerana tamin'ny Alarobia.
Ny lalàna iray notohanan'ny parlemanta Iraniana teo aloha tamin'ny volana Mey dia namaritra fa mila teti-dratsy farafahakeliny roa taona ny tetezamita feno ho an'i toman mba hahafahan'ny tsena sy ny orinasa hifanaraka amin'ny toe-javatra vaovao.
Ny lehiben'ny CBI, Abdolnasser Hemmati, dia nilaza fa vao tsy ela akory izay fa ny fanontana taratasim-bola misy zero efatra hatsatra dia efa natomboka tamin'ny fanovana endrika ampiharina amin'ny volavolan-dalàna momba ny antokom-pinoana lehibe.
"Ny fikasana hanapotika efatra aotra zero dia harahina ao amin'ny parlemanta vaovao fa hanonta ny CBI amin'ny endriny maivana ny sora-baventy ao amin'ireo naoty vaovao sorany mba hahafahany tandindon'ny tetezamita." hoy Hemmati.
Toman dia mbola ampiasaina ho toy ny vola antokom-pinoana malaza any Iran latsaky ny zato taona taorian'ny nandefasana azy ho an'ny rial. Ny toman malaza dia mitovy amin'ny rial 10, ambany kokoa ny sandany raha ampitahaina amin'ny toman kasaina haparitaka.
Nanamafy hatrany ny manampahefana fa ny fampidirana vola ambonimbony kokoa dia hanamorana ny fomba fitantanan-draharaha sy ara-bola ary tsy misy ifandraisany amin'ny ezaka hitazomana ny fiakaran'ny vidim-piainana eto amin'ny firenena.
Ny rial dia nibolisatra tamin'ny vola iraisam-pirenena tamin'ny voalohan'ny volana novambra sy taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tany Etazonia.
Manantena ireo mpampiasa vola fa hahazo tombony bebe kokoa ny rial ao anatin'ireo vinavinam-bahoaka fa hanomboka hanafoana ny sazy avy any Iran ny governemanta amerikana vaovao satria mikasa ny hiverina amin'ny fifanarahana nokleary izy izay nilaozan'ny fitondrana ankehitriny any Washington.
Mampiroborobo ny fizahan-tany avy any Afrika atsimo ka hatrany Seychelles
Ny fetin'ny fizahan-tany any Afrika dia nanomana fankalazana lehibe amin'ity volana ity